Toamasina: hisitraka ny « Salon de l’étudiant » ireo mpianatra - ewa.mg
News - Toamasina: hisitraka ny « Salon de l’étudiant » ireo mpianatra
Hotanterahina any Toamasina ny 30
sy 31 oktobra izao ny « Salon de l’étudiant » ho an’ireo
mpianatra nahavita ny fanadinana bakalorea sy hiakatra amin’ny
tontolon’ny oniversite amin’izay. Hivondrona amin’ny toerana iray
ireo sekoly ambony ao Toamasina sy ny manodidina hampahafantatra
ireo karazana lalam-piofanana ao aminy.
Miresaka mivantana amin’ireo
tompon’andraikitry ny sekoly, araka izany, ireo mpianatra.
Misokatra ny fanontaniana rehetra hatramin’ny mety ho lalan’asa ho
hita aorian’ny fiofanana na fampianarana hatao.
Betsaka ireo tanora afa-panadinana
bakalorea no sady te hiasa no hianatra ka misy ihany koa ireo
sekoly ambony mandefa manao fizarana asa avy hatrany hahafahan’ny
tanora mivelatra sahady sy manana lalan-tsaina amin’ny tontolon’ny
Takina indrindra amin’izao fotoana
ny fananana traikefa ka izany no anton’ny fizarana asa avy hatrany
na dia vao manomboka amin’ny taona voalohany aza ho an’ireo sekoly
ambony efa manome fahalalahana ny mpianany amin’izany sehatry ny
Misy amin’ireo tanora ihany koa no
tazomin’ny orinasa nanaovany fizarana asa avy hatrany rehefa
tsapan’ny mpampiasa fa matotra sy afaka mamokatra ho an’ny
orinasany ka avy hatrany dia omeny ny toerany ao amin’izany orinasa
L’article Toamasina: hisitraka ny « Salon de l’étudiant » ireo mpianatra a été récupéré chez Newsmada.
Fametrahana paikady amin’ny hanoanana: hanorenana orinasa mpamokatra sakafo any Atsimo
Fantatra nandritra ny filankevitry ny minisitra, ny alarobia teo, fa hisy ny orinasa goavana mpamokatra sakafo be otrikaina apetraka any atsimon’ny Nosy. Iarahana amin’ny Foundation Mérieux ny fanatanterahana izany.Tanjon’ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny hametraka paikady maharitra hiadiana amin’ny tsy fanjarian-tsakafo sy ny haintany mianjady amin’ny mponina any atsimon’ny Nosy, izay tena mampahory ny zaza sy ny ankizy.Hisy, araka izany, ny fiaraha-miasa eo amin’ny fanjakana sy ny Nutriset, izay miara-dalana amin’ny Foundation Mérieux amin’ny fanokafana izany orinasa fanodinana sakafo be otrikaina izany. Hisitraka izany ireo reny sy ny zaza ary indrindra ireo ianjadian’ny tsy fanjarian-tsakafo.Ho tonga tsy ho ela eto Madagasikara ny milina rehetra fanodinana sakafo, izay entin’ireo mpandraharaha sy mpiray antoka amin’ny fitondram-panjakana.Nambaran’ny filoham-pirenena fa anisan’ny sangany amin’ny fanatsarana ny fahasalamana amin’ny alalan’ny fampivelarana ireo ady rehetra amin’ny areti-mifindra, tena mahakasika ny olona marefo indrindra ny reny sy ny zaza ary matihanina amin’ny ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo ny Foundation Mérieux.Miara-miasa amin’ny Nurset izy ireo amin’ny famokarana sy ny fanodinana ary ny fitsinjarana sy fanaparitahana ny vokatra manerana ireo toeram-pitsaboana sy ireo toerana miahy ny vehivavy bevohoka sy ny ankizy.Anjaran’ny fitondram-panjakana kosa ny manampy ny orinasa Nutriset amin’ny fanatanterahana ireo tetikasa fananganana ny orinasa any Atsimo. Mametraka ihany koa ny fandaharanasa hoentina hampiroborobo ireo orinasa mpamokatra sakafo be otrikaina sy ara-pahasalamana.Jerena sy apetraka koa ny didy aman-dalàna manamora ny fihodinan’izany orinasa izany, ny fanalefahan-ketra sy ny haba. Ampandalovina eo anatrehan’ny filan-kevitry ny minisitra avokoa ny fanapahana izany rehetra izany.Iandraiketan’ny foundation Mérieux kosa ny famatsiam-bola manontolo amin’ny fampihodinana sy fananganana izany roinasa izany. Nanao fanamby ny orinasa Nutriset fa hitondra asa ho an’ny mponina any amin’ny faritra iasana ny fitsanganan’ny orinasa. Hampiasa ny vokatra eo an-toerana ihany koa hahazoan’ireo mpamboly tombony.Tatiana AL’article Fametrahana paikady amin’ny hanoanana: hanorenana orinasa mpamokatra sakafo any Atsimo a été récupéré chez Newsmada.
Fangatahan’ny Gem: tetibola ho fanarenana ny toekarena
Amin’ny volana oktobra ho avy izao ny fivorian’ny Antenimiera roa tonta, handinika ny tetibolam-panjakana taona 2021. Nanisy resaka ny ao amin’ny Vondron’ny orinasa eto Madagasikara (Gem) momba izany tetibolam-panjakana izany, tokony hiompana indrindra amin’ny fanarenana ny toekarem-pirenena aorian’izao krizy izao.Mila tohana avy amin’ny fanjakana ny orinasa ahafahana mihodina, koa angatahin’izy ireo ny hanalefahana ny hetra, ny ahazoana mindram-bola mampivelatra sy mampandeha ny fihariana, ahafahan’ny orinasa mamokatra tsy hanafarana any ivelany amin’izay vokatra azo vokarina eto an-toerana.Tsy vahaolana, hoy ny ao amin’ny Gem, ny fanakatonana orinasa. Vao mainka maro ny sahirana amin’ny fandoavan-ketra, tsy hiditra ny vola ho an’ny fanjakana, tsy tafavoaka ny krizy ny firenena. Nampanantena ny minisiteran’ny Toakerana sy ny tetibola fa hijery akaiky ny hanampiana ny sehatra tsy miankina. Efa misy ny fandaharanasa Fihariana an’ny fanjakana, saingy mbola sarotra ho an’ny rehetra ny mindram-bola amin’izany sy ambony ihany koa ny tahan’ny zanabola, araka ny fanamarihan’ny mpandraharaha sasany. R.Mathieu L’article Fangatahan’ny Gem: tetibola ho fanarenana ny toekarena a été récupéré chez Newsmada.
Fampivoarana ny any atsimo :: Hotohanana ara-bola ireo tantsaha
Hahazo fampindramam-bola ho an’ny asa famokarana ireo tantsaha any amin’ny faritra Atsimon’i Madagasikara, vokatry ny fiaraha-miasa eo amin’ny Fandaharanasa maneran-tany misahana ny sakafo (PAM) sy ny banky BOA, izay hamatsy vola, amin’ny alalan’ny fandaharanasa Fihariana. Ireo sehatra asa tena mampidi-bola ho an’ny tantsaha na fambolena na fiompiana na asa tanana no hahazo tombony amin’izao hetsika izao. Tantsaha roanjato avy any Anosy sy Androy, izay lasibatra amin’ny haintany sy ny kere, no hanombohana azy. “Mila fanampiana ireo olona ireo. Efa mitondra fampiofanana ihany ny PAM saingy mila vola ihany koa. Ny famokarana rehetra hataon’ireo tantsaha no tohanana ara-bola. Mitady ny lalam-barotra ho azy ireo ihany koa izahay”, hoy Zafindravaka Valérie, sekretera mpanatanteraky ny fandaharanasa Fihariana. Manomboka amin’ny 5 hatramin’ny 9% kosa ny zana-bola, alaina amin’izy ireo isan-taona, hoy Rafenomanjato Ravaka, avy ao amin’ ny BOA.Hanomboka amin’ity herinandro ity no hisitraka ny fampindramam-bola ireo tantsaha. L’article Fampivoarana ny any atsimo :: Hotohanana ara-bola ireo tantsaha est apparu en premier sur AoRaha.
Nanomboka ny 1aogositra ka hatramin’ny 12 novambra lasa teo, 14 ny olona voamarina fa matin’ny aretina pesta, araka ny vaovao nampitain’ny minisiteran’ny Fahasalamana, omaly. Sivy ireo tratran’ny aretina pesta miseho amin’ny arein-tratra ka namoy ny ainy, dimy kosa ireo matin’ny pesta atonditarina. Nahatratra 43 ireo olona voamarina fa nahitana trangan’aretina pesta tamin’ireo olona rehetra notilina. Pesta atodintarina ny34 ary pesta aretin-tratra ny sivy. Amin’ireo olona 34 voamarina fa voan’ny pesta atodintarina ireo, 29 ireo efa manaraka fitsaboana eny anivon’ny tobim-pahasalamana. Ho an’ny pesta aretin-tratra, namoy ny ainy avokoa ireo voamarina fa nahitana ny tranga. Ny distrika nahitana ireo trangan’aretina voamarina fa pesta: i Tsiroanomandidy, i Befotaka, i Manandriana, Ambatofinandrahana, i Midongy Atsimo, Ambalavao, Anjozorobe, Ankazobe, i Miarinarivo, i Moramanga, Ambositra, i Betafo ary i Faratsiho. Manahy amin’ny fiparitahan’ny valanaretina pesta ny mponina eto Antananarivo satria ny mitobaka eny rehetra eny ny fako efa tao anatin’ny andro maromaro izay. Miezaka miasa andro sy alina ny kamiao fa tsy mahazaka betsaka. Voalaza anefa fa nahazo kamiao ampolony ny Samva avy any amin’ny minisiteran’ny Rano hanalana ny fako. Vonjy
Andohatapenaka: notorin’ny mpivaro-tena fa tsy nety nandoa vola ilay lehilahy
Ny asabotsy tamin’ny 10 ora maraina, nisy lehilahy iray nenjehina olona maromaro teny amin’ny faritra Andohatapenaka. Raha nahita izany ny polisy, nandray andraikitra nisambotra ity lehilahy ity. Nentina teo anivon’ny kaomisarian’ny CSP7 izy hanaovana fanadihadiana. Tamin’io maraina io ihany, tonga nametraka fitarainana mahakasika io lehilahy io ny vehivavy mpivaro-tena miisa efatra noho izy tsy mety mandoa vola sady mandrahona amin’ny antsy no mbola miverina any amin’ny tranon’ireo mpivaro-tena ary mamaky izany ka maka izay rehetra azony alaina ao. Fantatra ihany koa fa efa nifonja teny Tsiafahy ity lehilahy ity noho ny antony fitanana fitaovam-piadiana sy fikambanan-jiolahy. Niaiky ny fiampangana azy ity lehilahy ity.Nidoboka eny amin’ny fonjan’Antanimora koa ny jiolahy iray tompon’antoka amin’ny fanaovana sinto-mahery eny amin’ny faritra 67 ha. Raha ny tatitra nampitain’ny polisy, ny alatsinainy alina teo, voasambotra teny 67 ha rehefa avy nanendaka vehivavy iray niandry fiara ity jiolahy ity. Mody mijoro teo akaikin’ity vehivavy ity ilay jiolahy ka rehefa hitany fa variana ilay vehivavy, nalainy ny telefaonina finday tao am-paosiny.Jean ClaudeL’article Andohatapenaka: notorin’ny mpivaro-tena fa tsy nety nandoa vola ilay lehilahy a été récupéré chez Newsmada.
Vehivavy mitondra vohoka enim-bolana niharan’ny fanolanana tambabe tao Vohitraivo Amparafaravola, ny zoma teo. Avy nisafo tany amin’ny dokotera izy no nifanehatra tamin’ireo jiolahy ka nanamparan’ireo jiolahy habibiana. Tsy vitan’izay fa notapahin’ireo nahavanon-doza ny lohany rehefa avy naolan’izy ireo.L’article Tselatra a été récupéré chez Newsmada.
Tolo-tanana ho an’i Piff: niray hina tanteraka ireo mpiangaly mozika rap
Tontosa, ny asabotsy 21 novambra teo nanomboka tamin’ny 10 ora maraina, ny tolo-tanana ho an’i Piff. Fiaraha-mientana hip hop… « Iray aina, iray vatsy », notanterahina tetsy amin’ny Noumba Club Itaosy (Guest House teo aloha) izy ity. Maro ny nandray anjara tamin’izany hetsika izany, toa an-dry Mamy Saya & Alkassim, ny 08MM, ny Miora Killah&Ratex, ny Slem (Bogota), ny 67 Squad, ny 102 Fassad, ny Xcrew, ny Mista&Boska, ny Dahalo, ny Kriminaly, ny Etika, ny Familia, ny Reen-Key, ny Gouvernigga, ny Syndikat Kaid, ny Map, architek. Noho ny tsy fahasalamana mahazo an’i Piff, avy ao amin’ny 102 Fassad, ny anton’ity hetsika ity. “Aretin’ny havokavoka miampy diabeta ny mahazo azy ary misy fahasarotana izany. Efa lany ny vola eo am-pelatanan’i Piff, amin’ny fitsaboana, ka mitondra anjara biriky izahay… Tsy avela irery ny namana satria «Iray vatsy, iray aina », araka ny nambaran’ny namana akaiky azy, ao anaty tontolon’ny rap. Manao antso avo ho an’ireo malala-tanana sy mpanaraka kolontsaina malagasy i Piff satria mbola maro ny fandaniana amin’ny fitsaboana azy, raha ny nambarany. Manana ny pejy facebook 102 Fassad ny vondrona misy azy ary afaka mifanerasera ao ho an’izay mila izany. Izahay eto amin’ny Gazety Taratra dia mirary fahasalamana feno ho an’i Piff.Narilala L’article Tolo-tanana ho an’i Piff: niray hina tanteraka ireo mpiangaly mozika rap a été récupéré chez Newsmada.